Infographics iyo Video: Sahaminta Habdhaqanka Raadinta ee Internetka | Martech Zone
Isniin, April 15, 2013 Isniin, April 15, 2013 Douglas Karr
iAcquire waxay samaysay daraasad saddex qaybood ah oo ku saabsan sida dadku ugu dhaqmaan khadka tooska ah - iyagoo soo saaraya sawirro loogu talagalay dhaqanka raadinta, dhaqanka guurguura iyo dhaqanka warbaahinta bulshada. Natiijooyinka oo buuxa waxaa lagu arki karaa fiidiyowgan sawir-gacmeedka ah:
iAcquire iskaashi la leh Baahi Dhagaystayaasha Daanyeerka daraasad na siinaysa aragti wax ku ool ah oo ku saabsan qaababka raadinta.
Iyada oo aaladaha moobiilku ay udub dhexaad u yihiin nolosha dadka, iAcquire waxay dooneysay inay soo uruuriso xoogaa aragti ah oo ku saabsan sida dadku ugu adeegsadaan aaladooda in ay ku fuliyaan baaritaankooda maalinlaha ah.
Qeybtii ugu dambeysay, iAcquire waxay weydiisay dadka isticmaala internetka sida ay ugu adeegsadaan warbaahinta bulshada nolol maalmeedkooda. Jawaabaha ay ururiyeen waxay bixiyeen xog aad u xeel dheer. Eeg waxaad ka baran karto habka ay isticmaaleyaashaadu ula falgalaan warbaahinta bulshada.
Tags: iacquiredhaqanka guurguuradhaqanka mashiinka raadintadhaqanka warbaahinta bulshadanatiijooyinka sahankaSurveyMonkey